‘AZIVALWE IZINKAMPANI EZINGAWULANDELI UMTHETHO’ ANC – eHowzit
‘AZIVALWE IZINKAMPANI EZINGAWULANDELI UMTHETHO’ ANC
Iqembu leANC esifundazweni saKwaZulu Natal selisabise izinkampani zokwakha ezingayilandeli imigudu yokwakha ngokuthi zizovalwa kulesi sifundazwe.
Iqembu likusho lokhu esitatimendeni elisikhiphe, emuva kokuba uphahla lwenxanxathela yezitolo ebikade yakhiwa endaweni yaso Tongaat enhla nesifundazwe luwele phezu kwabasebenzi kwalimala kanzima abangama-30 njengalokhu sekutholakele nomunye eseshonile nokwandisa isibalo siye kwabathathu(3).
Okhulumela iqembu uMnu Senzo Mkhize uthe kuzomele uHulumeni azibhekisise izinkampani ikakhulukazi ezinikezwa amathenda ukuba ziayilandela yini imigomo yezokwakha.
“Sizokwenza isiphakamiso kuHulumeni ukuba azivale zonke lezi zinkampani ezingayilandeli lemithetho,kanti futhi nozakwethu bezepolitiki kumele baziqaphele lezi zinkampani banganikezi abantu abathile imisebenzi ngoba bejahe ukudla nabo” kuqhuba uKhabazela esitatimendeni
Sekuphinde kwavela neminye inibiko ethi lesigameko senzeke emuva kwenyanga uMasipala weTheku ulayele lenkampani ukuba ingaqhubeki nomsebenzi. Nosekushiye iqembu leANC lizwakalisa okukhulu ukukhathazeka.
uMkhize uphinde bonga abasebenzi bezimo eziphuthumayo, ngokusebenza ngokuzikhandla bebheka abalimele, nophinde washayelel isipikili emaphoyiseni ukuba aphenye nangaphansi kwezidindi kuze kuboshwe abangayilandelanga imithetho.